(XOG) Waa maxay khatarta ka dhalan karta heshiiska Farmaajo, Qoor Qoor iyo Rooble? - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (XOG) Waa maxay khatarta ka dhalan karta heshiiska Farmaajo, Qoor Qoor iyo...
(XOG) Waa maxay khatarta ka dhalan karta heshiiska Farmaajo, Qoor Qoor iyo Rooble?
MOL oo sadaxdii maalin ee u danbeeysay ku jirtay baaritaano iyo wareeysiyo gaar ah oo ay la yeelatay mas’uuliyiin aad ugu dhaw-dhaw Farmaajo iyo Rooble ayaa xaqiijiyay in uu jiro heshiis laba geesood ah oo ah u dhaxeeya Farmaajo oo dhinac ka soo jeedo iyo Qoor Qoor iyo Rooble oo dhanka kale ka soo jeedo.
Heshiiskaas ayaa waxa gadaal ka taagan oo damaanad qaaday Fahad Yaasin. Heshiiska oo fakarkiisa uu ka yimidi Axmad Qoor Qoor oo uu garab ku siinayo Wasiirka Batroolka Cabdirsashiid Shiikhaalow ayaa ah in Farmaajo la siiyo damaanad in Maxamed Xuseen Rooble uusan marnaba ka hor imaan doonin danaha Doorashada.
Heshiiskaan ayaa yimid ka dib markii Farmaajo u gar sheegtay Qoor Qoor kaas oo ahaa in lagu kadshay laguna qiyaanay heshiiskii dib looga noqonaayay waqti kordhinta. Qoor Qoor oo kulan saacado qaatay la qaatay Fahad Yasin ayaa la iskula af gartay in dib loo saxo wixii dhacay loona ogolaado laba dhinac in ay wada shaqeyn cusub furtaan.
Kulumo dheeraad ah oo la qabtay ka dib, RW Rooble ayaa dhankiisa xaqiijiyay in uu wali ku taagan yahay heshiiskii uu la galay Farmaajo markii la magacaabayay kaas oo ahaa in uu ka shaqeyn doono dib u soo doorashada Farmaajo.
“ Aniga waligeey ma qayaanin Madaxweynaheyga , mana qiyaani doono, aniga oo makhaayad Nairobi fadhiyo ayuu jagadii ugu sareeysay dalka ii dhiibay, ma aqaan sida aan ugu jisaari karo” ayuu yiri Roobke.
Dhanka kale Qoor Qoor ayaa waxa uu balan qaaday in dhowrka bilood ee soo socda uu si joogta ah u garab taagnaan doono RW Rooble isaga oo xaqiijinaayo in uusan marnaba ka bixin heshiiskii ugu danbeeyay ay labada dhinac isla gaareen. Si kale hadii loo dhigo, Axmad Qoor Qoor oo hesiis gaar ah kula jiro Fahad Yasin ayaa dhankiisa sheegay in uu isagu ku sugnaan doono Muqdisho uuna noqon Ra’iisal Wasaaraha taagan daaha gadaashiisa fadhiya oo cagta cagta u saarayo Rooble.
Waxaa muuqato in uu Farmaajo markale siyaasad yaab leh la ciyaaray mucaaradka; 1) isaga oo eedii loo haystay iska leexiyay 2) ku guulaysaty inuu Villa Soomaaliya ku sii nagaado, ugu yaraan dhowr bilooodka soo socda iyo 3) in uu ka gaar aarguto ciidankii iyo saraakiishii ka gadooday waqi kordhintiisa.
Sida aad ku arki doontaa nwarbaahinta Rooble ayaa bilaha soo socda matali doona riwaayadii loo soo dhiibay ee ahaa in uu la wareego hogaanka doorashada, lakiin shaqada doorashada waxaa hogaanka u qaban doono Farmaajo. Dhanka kale Qoor Qoor ayaa ku beerlaxawsanaya in uu difaacayo qadiyada beesha Habargedir oo haatan ku fadhida kursiga Ra’iisal Wasaaraha.